CPL T20 : सन्दिपको जमैकाको छैठौं खेल सेन्ट किट्स बिरुद्ध – WicketNepal
WicketNepal Staff, २०७७ भाद्र १३, शनिबार १४:११
करेबियन प्रिमियर लिग टि-२० ( सिपिएल ) अन्तर्गत नेपाली खेलाडी लामिछानेले प्रतिनिधित्व गरिरहेको टिम जमैका तलावाजले छैठौं खेलमा सेन्ट किट्स एण्ड नेभिस पेट्रिएट्ससंग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। दुवै टिमले एक-अर्का बिरुद्ध पहिलो खेल खेल्न लागेका हुन्।
लिग अन्तर्गत अनियमित प्रदर्शन गर्दै आएको जमैकाले ५ खेल खेल्ने क्रममा २ जित र ३ हार बेहोरेको छ। यस क्रममा बार्बेडोससंग बिहिबार बिहान सम्पन्न खेलमा ३६ रनले पराजित भएको थियो। अंकतालिकामा ४ अंक सहित जमैका पाँचौ स्थानमा रहेको छ। सेन्ट किट्सलाई पराजित गर्दै जमैका १ स्थान माथि उक्लदै सेमीफाइनल दौडमा आउन चाहनेछ।
अर्कोतर्फ प्रतियोगिताकै कमजोर टोलि सेन्ट किट्सले ५ खेलमा ४ खेलमा हार र मात्र एउटा जित दर्ता गरेको छ। २ अंक सहित रायद इम्रिट कप्तानीको टिम पुछारमा रहेको छ। अबको खेल नजितेको खण्डमा सेन्ट किट्सको सेमीफाइनल यात्रा निकै मुस्किल हुनसक्छ।
मिति र समय : अगस्ट २९, राति १२:०० बजे ( नेपाली समय ) , २:१५ बजे दिउसो ( स्थानीय समय )
अन्तिम ५ खेल : जमैका १ – ४ सेन्ट किट्स
जमैकाको हालसम्मको प्रदर्शन ( ५ खेलमा २ जित र ३ हार )
१. सन्दिप लामिछाने : प्रतियोगितामा लगातार किफायती बलिंग गरेका नेपाली गुग्ली ब्वाईले ५ खेलमा ७ विकेट लिईसकेका छन्। उत्कृस्ट प्रदर्शन गरिरहेका सन्दिपले यस क्रममा कुल २० ओभर बलिंग गर्दा मात्र ८९ रन खर्चिएका छन् र मात्र ४.४५ प्रतिओभर रन खर्चेका छन्। उनले पहिलो दुइ खेलमा सेन्ट लुसिया, ट्रिनबागोसंग १/१ विकेट, तेश्रो खेलमा गायनासंग २ विकेट, चौथो खेलमा गायना बिरुद्ध १ विकेट तथा पाँचौ खेलमा बार्बेडोस बिरुद्ध २ विकेट लिएका थिए।
सन्दिपले प्रतियोगितामा अहिलेसम्मकै किफायती बलिंग गर्ने क्रममा गायना अमेजन वारियार्स बिरुद्ध ४ ओभरमा मात्र ८ रन खर्चेर २ विकेट लिएका थिए। यस्तै सन्दिप प्रतियोगितामै सबैभन्दा चौथो किफायती बलर समेत हुन्। मार्क डेयाल ( ३.५० ) , अशमेड नेड ( ३.९१ ) र मुजिब उर् रहमान ( ४.०५ ) सन्दिप भन्दा अघि रहेका छन्। सुनिल नारायण, मोहम्मद नाबी जस्ता बलरलाई किफायती बलिंगमा नेपाली स्पिनरले पछि छाडेका छन्।
इनिंगको बीचको ओभरमा बलिंग गर्ने क्रममा सन्दिपले किफायती बलिंग गर्नुको साथै विकेट पनि निकालेर बिपक्षी टिमलाई निरन्तर दबाब बनाएका छन्।
२. मुजिब उर् रहमान : ५ खेलमा १२ विकेट लिएर प्रतियोगिताकै सर्वाधिक विकेट लिएका अफगानी अफ स्पिनर मुजिब बिपक्षी टिमको लागि निकै मुस्किल बलर सावित भइरहेका छन्। विकेट मात्र हैन उनि प्रतियोगिताकै तेश्रो उत्कृस्ट ( ४.०५ ) को इकोनोमिले रन खर्चिरहेका छन्।
सुरुवाती ओभरमै बलिंग गर्न आइरहेका अफ स्पिनरले लगातार विकेट दिलाइरहेका छन्। २० वर्षीय बलरले पछिल्लो ३ खेलमा समान ३ विकेट लिएका छन्। जमैका बिरुद्ध लगातार २ खेलमा तथा अन्तिम खेलमा बार्बेडोस बिरुद्ध उनले ३ विकेट लिएका थिए। त्यस अघि पहिलो खेलमा सेन्ट लुसिया बिरुद्ध २ तथा ट्रिनबागो बिरुद्ध १ उनले १ विकेट लिएका थिए।
सेन्ट किट्सको हालसम्मको प्रदर्शन ( ५ खेलमा १ जित र ४ हार )
सेन्ट किट्सको लयमा रहेका २ खेलाडी :-
१. इभिन लुइस : टिमले लगातार खराब प्रदर्शन गरे पन बायाँ हाते ब्याट्सम्यान लुइसले निरन्तर रन बनाइरहेका छन्। उनले ५ खेलमा १६१ रन बनाइसकेका छन् र प्रतियोगिताकै दोश्रो सर्वाधिक रनकर्ता हुन्। ओपनिंग ब्याट्सम्यानले यस क्रममा बार्बेडोस ट्राइडेन्ट बिरुद्ध ८९ रन बनाएका थिए जुन लिगकै सर्वाधिक व्यक्तिगत योगफल हो।
२. रायद इमृट : आफ्नो टिमको प्रदर्शन बिर्सनलायक रहे पनि कप्तान इमृटले राम्रो योगदान दिईरहेका छन्। दायाँ हाते तिब्र गति बलरले हालसम्म ५ खेलमा ७ विकेट लिनुको साथै ४३ रन पनि बनाएका छन्। उनले प्रतियोगितामात्र ५.४४ प्रति ओभर रन खर्चिएका छन् र सबैभन्दा किफायती बलरको सुचीमा नवौं स्थानमा तथा धेरै विकेट लिने सुचीमा सातौँ स्थानमा छन्। उनले गायना बिरुद्धको खेलमा ३ तथा बार्बेडोस बिरुद्ध २ विकेट लिएका थिए।
इभिन लुइसले बार्बेडोस बिरुद्ध ८९ रन बनाएका थिए जुन लिगकै सर्वाधिक व्यक्तिगत योगफल हो